Fanantenam-baovao vaovao hampifandraisan'i Sipra ny sidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fanantenam-baovao vaovao hampifandraisana ny sambon'i Sipra
Fanantenam-baovao vaovao hampifandraisana ny sambon'i Sipra
Septambra 29, 2017
Ny fandraisana anjaran'ny Hermesports sy ny Fikambanana fizahan-tany any Sipra (CTO) amin'ny asan'ny fihaonambe fampandrosoana ny zotram-piaramanidina "Routes World 2017" isan-taona dia satro-boninahitra lehibe.
Ny kaonferansa tamin'ity taona ity dia natao tany Barcelona, ​​Espana, teo anelanelan'ny 23-26 septambra ary nahitana zotram-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary solontenan'ny masoivoho fizahan-tany an-jatony izay niresaka momba ny fiaraha-miasa ary koa ny fanovana sy ny fironana amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina.
Delegasiona avy any Hermes, notarihin'ny Senior Senior Marketing and Communication Manager, Ramatoa Maria Kouroupi sy delegasiona avy amin'ny Organisation fizahantany any Sipra, notarihin'ny Tale Jeneraly lefitra Andriamatoa Marinos Menelaou no tonga nanatrika ny fihaonambe.
Nandritra ny fihaonambe tamin'ity taona ity, ny delegasiona Cypriot dia nanao fivoriana 25 niaraka tamin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny solontenan'ny seranam-piara-manidina hafa, miaraka amin'ny famantarana tsara ho an'ny vanim-potoanan'ny ririnina sy fahavaratra 2018 ary ny ho avy rehetra ho avy, 2019.
Toa ny fisian'ny fiaraha-mientana miaraka amina paikady tokana sy hetsika iraisana dia manampy amin'ny fisarihana zotram-piaramanidina vaovao ary hampitombo ny sidina amin'ny zotra efa misy. Miorina amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny "Routes", dia misy porofo mazava fa ankoatry ny fiakarana efa nambara tamin'ny fahavaratra ho avy, dia lalana enina vaovao no hanampy, izay hambara raha vantany vao vita.
Amin'ity toe-javatra ity dia nanamafy ny fiaraha-miasa akaiky, ny finiavana ary ny fanamafisana orina ny indostrian'ny fizahantany any Sipra i Hermes Airport sy ny Fikambanana fizahan-tany any Sipra.
Fanambarana ofisialy ny rivodoza María avy any Meet Puerto Rico
Mora kokoa sy haingana kokoa ny fandefasana mpiasa an'habakabaka famandrihana amin'ny fampiharana vaovao
Eurowings dia manohy ny sidina mankany Stuttgart avy amin'ny seranam-piaramanidina Budapest